Kheyre oo kulan la qaatay Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Bakool – GEELLE MAG
Kheyre oo kulan la qaatay Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Bakool
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali kheyre oo uu wehlinayo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kulan la Qaatay Maamulka Degmooyinka Xudur ee Rabdhuure iyo Tiyeeglow, kaasi oo loogu kuurgalayey Xaaladaha ka jira Gobolka Bakool
Maamulka Degmada Xudur iyo Odayaasha ayaa Madaxda kala hadlay Dardar gelinta howlaha Dib u xureynta deegaannada hoos yimada Degmada iyo sidii loo tayeyn lahaa Xarumaha Waxbarashada, Caafimaadka, Shaqo Abuurka Dhalinyarada iyo sidii looga Qeyb qaadan lahaa Dib u xureynta Guud ee Gobolka Bakool.
Maamulka iyo Odayaasha Dhaqanka Degmooyinka Rabdhuure iyo Tiyeeglow ayey sidoo kale Madaxda kala hadashay Sidii Degmooyinkaas looga saari lahaa Al-Shabaab oo gacanta ku haya degmnooyinka ay Guddoomiyeyaasha ka yihiin.
Ra’iisul Wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre ayaa balan qaaday in ay wax ka qaban doonaan Arrimaha Waxbarashada, Cafimaadka iyo Shaqa la’aanta Jirta, waxa uu sidoo kale sheegay in Muhiimada Koowaad ay tahay sidii looga Shaqayn lahaa Amniga Gobolka Bakool. sidoo kale Dowlad ahaan ay wax ka qaban doonaan tayeynta Ciidanka Xooga Dalka.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa Mas’uuliyiinta iyo Odayaasha Dhaqanka waxa uu kula dardaarmay in ay Xoojiyaan Hanashada Ammaanka Guud ee Gobolka Bakool si dadka ku nool ay Nabad ugu wada noolaadaan.
Soomaaliya oo Wareejisay Shir Suddoonka Jaamacadda Carabta